トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Sababta talineyso ruuxyada faal phone aragto Appraisal (qiimaynta telefoonka)
Isagoo ka hadlayay of khabiir aragti ruuxiga ah, ayaa booqday asalka ah derjada, laakiin waxaa jira image ah waxa loo sameeyaa jawi weyn ah qodob xiisad, ma had iyo jeer waa kiiska ku dhaqanka.
telefoonka u psychics oo na maal-lagala baxo macalinka qiimaynta litchi sidoo kale waa wax badan. Haddii aad isticmaasho adeegga loo yaqaan
telefoonka maal-sheegis, ay macquul tahay in ay qaataan dareento si xor ah u soo xiriir macallinka psychics ku qoran site telefoonka maal-sheegistii, waxaad heli kartaa qiimaynta a aragti ruuxiga ah ee telefoonka.
waxa ugu horeeya ee meesha loo yaqaan aragtida ruuxiga ah, xitaa meelo ka fog, maxaa yeelay, wax noqon karaan haddii ay awood u leeyihiin in la odoroso kuwa aan muuqan ee maanka derjada ah.
sabab ay ku talinaynaa a phone call maal-sheegistii in qiimaynta aragtida ruuxiga Inta badan oo ka mid ah faa'iidooyinka isticmaalaya
telefoonka maal-sheegistii waxaa ugu wacan in tayada psychics yihiin heerka qaarkood rahaamad ama in ka badan.
at this site, laakiin waxaan ku talinaynaa goobta of telefoonka maal-sheegistii in Vernis, derjada ama maal-lagala baxo in ay ka diiwaan gashan Vernis iyada oo heerka pass oo ah 3% ama ka yar oo ah xisaab hubinta ka qarxay, maxaa yeelay waxa ay tahay oo kaliya dadka awoodeedu sarayso, Tani waxay ka khayr badan xadgudubyada si aad u weydiiso litchi si psychics aan wax ogayn meesha qof ku jira.
Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale waa wax macquul ah in isku dhafka ah ee dadka, sida dadka musuqmaasuqa in qofka sheeganaya inuu yahay psychics oo u ogolow maal.
isticmaalaya hadal ee reading qabow sida xaasidnimo, ogol yahay in ay ku kalsoon tahay wada tashiga ee, sidoo kale waxaa jira khatar ah in ama la iibsado saamiyo doorasho ka qaalisan.
sidoo kale kale, ka faa'ideystay in xaaladda nafsiga ah in quus tashiga ee, ka eryay si aanay u sii silban walwalka caadiga ah go'aanka, Maskax bedel ama, sidoo kale ma eber psychics xaasidnimo ah isku dayaan in ay gacanta ku hay xaqiiqada Tani waa.
barta in, sababtoo ah waxaa jira baaritaan haddii goobta telefoonka maal-sheegistii, sidii aan hore u soo sheegnay, derjada xaasidnimo ah sida waxaa laga heli karaa istareexsan waa hab in la ciribtiray.
marka la eego xidhiidhka dhismaha kalsoonida la derjada, ma diidi in wax yar ka jiro daqiiqadii fool-ka-fool qiimaynta ah, haddii aad ku dhuftey ayaan yaadan derjada in qiimaynta fool-ka-fool ah, waxa ay keeni kartaa in ku qanacsan dheeraad ah si xoog leh maxaa yeelay, haddii qiimaynta aragtida ruuxiga ah waa mid ka mid ah marka hore, marka hore waxa ay u muuqataa in ay tahay wax wanaagsan in la ogaado aragtida ruuxiga ah u eg in qiimaynta telefoonka.